Inty sy Nday: Avoahy ny didim-panjakana e !
Vous êtes ici : Accueil GAZETIN'NY NOSY Inty sy Nday: Avoahy ny didim-panjakana e !
Isan’ny loha-hevitra nivoitra tao amin’ny fivorian’ny filankevitry ny governemanta teny Mahazoarivo ny talata teo ny akon’ny hetsika fankalazana ny faha-15 taonan’ny Tim tamin’ny sabotsy ka nitohy tamin’ny fidinana an-dalambe tonga teny Analakely. Nofaritan’ny filankevitry ny Governemanta ho « asa fanakorontanana » izy iny. Ingahy Rivo Rakotovao, filohan’ny Hvm aza moa dia nilaza mihitsy fa « fanonganam-panjakana ».
Dia lasa any amin’ny ohabolana malagasy iray izay ny fisainana, dia ilay hoe « tsy ho faty raha tsy ianjeran-tanan-tsotro ». Ny tanan-tsotro dia isan’ny kojakoja maivana satria vita amin’ny ahitra, ka rehefa mamosavy loatra ny eritreritrao, dia na tanan-tsotro aza mianjera aminao dia mety hahafaty anao, mety hanapaka ny lalan-dranao.
Fa inona ihany no tsy fanakorontanana ho an’ny fitondram-panjakana e ! Ny mitory fanompoana sy fankatoavana ny ataony ?
Mahavariana anefa fa isaka ny misoka-bava ny mpitondra isany dia manao angoan-tenda hatrany ny hoe «manaja ny fahalalahana maneho hevitra izahay», « manome lanja ny soatoavina demokratika izahay », sy ny sisa. Ka ny tokony hatao ange izany dia ny famoahan’ny fitondrana Hvm didim-panjakana manambara ny maha-latsaka an-katerena ny firenena, dia izay sitra-pon’ny mpitondra sisa atao, ka na hanampim-bava ny gazety sy tsy hamela ny olona haneho hevitra aza izy dia efa mazava ny resaka e !